KN95 Kn95 inodzivirira mask
N95 inodzivirira mask
Disposable yekurapa mask
Epidemic yekuzvidzivirira ruzivo
Epidemic kuchengetedza ruzivo rwevamwe vanhu vatove kana kuti vachazoenda kunoshanda, mukubuda kwazvino kunofanira kuita? 1. Maitiro akapfeka zvakanaka ekurasa ekuvhiya maski ari munzira yekuenda kubasa.Isare kutora zvifambiso zvevoruzhinji, zvinokurudzirwa kufamba, bhasikoro kana kutora mota yakazvimiririra, bhazi rekubatira kuenda kubasa.Kana iwe uchi ...
Kukurira kudzivirira chirwere ichi uye kudzora hondo, chirevo chikuru ndeche "kudzivirira"
Kukurira iyi ekudzivirira kwechirwere uye kudzora hondo, chirevo chakakosha ndeche "kudzivirira". WHO yakazivisa riwaya coronavirus pneumonia denda se "dambudziko". Masiki madiki akakwezva mabhiriyoni evanhu pasi rese. Kumashure kwemasiki madiki kune ketani yekugadzira uye yekugadzira uye yakazara ...
n95 masiki ekudzivirira
Geza maoko ako usati wapfeka mask kana kudzivirira kubata mukati memasiki kuderedza njodzi yekusvibiswa. Kuparadzanisa mukati uye kunze kwemasiki, kumusoro uye pasi. Usashandise ruoko kupuruzira iyo maski, N95 mask inogona kungozviparadzanisa hutachiona mumukati memaski, kana ...
Kero: No.302 Guiyue Road, Guanlan